Diyaaradaha Droneska iyo sirdoonka macmalka ah si ay nooga caawiyaan la dagaalanka dabar goynta xoolaha | Qalabka bilaashka ah
Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sirdoonka macmalka ah si ay nooga caawiyaan la dagaallanka dabargoynta xoolaha
Si tartiib tartiib ah ayaa loo muujiyey in adeegsiga teknoolojiyada cusub ee qaybaha kala duwan ee nolosha ay naga caawin karto inaan ku xallino dhibaatooyinka muhiimka ah xawaaraha layaabka leh. Tusaale waa sida koox cilmi baarayaal ah, ay ugu heelan yihiin ilaalinta nolosha noocyada kala duwan ee xoolaha ee halista baabi'inta, ayaa muujisay in isku-darka drones-ka oo leh sirdoon macmal ah ay ku filnaan karto si aad shaqadaada uga dhigto mid aad u dheereeya oo, wixii ka sarreeya, ka daal yar.
Sida aad u akhriyi karto maqaal lagu daabacay joornaalka Bulshada Deegaanka ee Bitanic 'Hababka loo yaqaan Ecology iyo Evolution', Kooxda cilmi baarista Australia waxay go'aansadeen in tirinta duurjoogta ay u baahan tahay in la hagaajiyo farsamada inta ugu macquulsan. Tijaabooyin badan ka dib, waxay ku guuleysteen inay soo saaraan nidaam awood u leh tirinta noocyada kala duwan ee xoolaha, oo ay ku jiraan dhowr nooc oo shimbiro ah, iyagoo ka dhigaya barxadooda badan oo sax ah marka la barbardhigo nidaamyadii loo adeegsaday ilaa hadda qaab dhaqameed.
Koox cilmi baarayaal ah oo reer Australia ah ayaa bilaabay inay adeegsadaan isku-darka drones-ka iyo sirdoonka macmalka ah si loo tiriyo gumeysiga shimbiraha khatarta ku jira.
Sida la muujiyey Jarrod Hodgson, qoraaga hormoodka ah ee waraaqda cilmi baarista iyo ardayga PhD ee Kulliyadda Cilmiga Biyolojiga ee Jaamacadda Adelaide:
Iyada oo xayawaan badan oo adduunka ku nool ay wajahayaan baabi'inta, baahida aan u qabno xogta duurjoogta oo sax ah weligeed kama weynaan. Kormeerka saxda ahi wuxuu ogaan karaa isbeddelada yar ee tirada xoolaha. Taasi waa muhiim maxaa yeelay haddii aan sugeyno isbeddel weyn oo ku yimaada tirooyinkaas si aan u ogaanno hoos u dhaca, waxay noqon kartaa xilli dambe in la ilaaliyo noocyada loo hanjabo.
Dadka duurjoogta ah, tirada dhabta ah ee shakhsiyaadka lama yaqaan. Tani waxay adkeyneysaa in la tijaabiyo saxnaanta habka tirinta. Waxaan u baahanahay inaan ku tijaabino tikniyoolajiyadda halka aan ku ogaanay jawaabta saxda ah.
Natiijooyinka ayaa gacan ka geysan doona turxaan bixinta iyo hagaajinta borotokoolka kormeerka diyaaradaha si ay diyaaradaha aan duuliyaha laheyn wax yar ama aysan saameyn ugu yeelan duurjoogta. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay noocyada u nugul khalkhalka iyo halka hababka dhaqameed ee ugu dhowaanshaha noocyadu aysan u ahayn suuragal ama loo jeclaan karin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Drones » Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sirdoonka macmalka ah si ay nooga caawiyaan la dagaallanka dabargoynta xoolaha
Branch Technology waa shirkada ka dambeysa daabicida gurigan quruxda badan